रूपन्देहीलाई उदयपुर गोल्डकप- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
रूपन्देहीलाई उदयपुर गोल्डकप
फाल्गुन ६, २०७३ डिल्लीराम खतिवडा
उदयपुर — रूपन्देदी ११ ले सदरमुकाम गाईघाटमा बिहीबार मोरङलाई टाइब्रेकरमा ४–३ ले पराजित गर्दैै चौथो रमपम उदयपुर गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता जितेको छ ।
थारुहट रंगशालामा भएको फाइनलमा निर्धारित ९० मिनेटको खेल गोलरहित बनेको थियो । त्यसपछि पेनाल्टी सुटआउटमा निर्णय हुँदा रूपन्देदीबाट सुवास मगर, बुद्ध चेम्जोङ, उत्तम गुरुङ र दिलीप क्षत्रीले गोल गरेका थिए । दिलीपको पेनाल्टी प्रहार नै निर्णायक बन्न पुगेको थियो । कालु थापा गोल गर्न असफल भए ।
मोरङबाट नीरज बस्नेत, बुद्धिमान राई र विकास खवास मात्र गोल गर्न सफल भए । मोरङका विदुर रिजाल र अनेश मगरको प्रहार गोल हुन सकेन ।
विजेता रूपन्देदीले २ लाख र उपविजेता मोरङले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार थापेका थिए । म्यान अफ द म्याच रुपन्देहीका पिटर घोषित भए । सर्वोत्कृष्ट खेलाडी मोरङका नीरज बस्नेत घोषित भए । उत्कृष्ट गोलरक्षक रूपन्देदीका दिलीप क्षत्री र उदीयमान खेलाडी उदयपुरका रामु थापामगर घोषित भए ।
सर्वाधिक गोलकर्तामा हिमालयन शेर्पाका विश्वास श्रेष्ठ, रूपन्देदीका दिवस राई र संकटाका राजु पौडेल थिए । उनीहरूले समान २ गोल गरेका थिए ।
प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७३ ०८:५८
दमक — ‘प्रहरी हौं’ भन्दै मोरङ बेलबारीका दुई व्यक्तिले किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेका छन् । प्रेमीसँगै रहेकी बेलबारीकै १६ वर्षीया किशोरीलाई उनीहरूले सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
गत माघ २८ गते राति उक्त घटना भएको हो । किशोरीलाई बेलबारी ३ का ५२ वर्षीय शम्भुकुमार थापा र ४६ वर्षीय प्रेमबहादुर गुरुङले बलात्कार गरेका हुन् । २८ गते राति कोसी–हरैंचा नगरपालिकाको खुर्साने चोकमा पैदल हिँडिरहेका किशोरी र उनका प्रेमीलाई थापाले आफू प्रहरी भएको भन्दै हप्काएका थिए । ‘यत्रो राति तिमीहरू कहाँ हिँडेको ? घर जानुपर्दैन ? भन्दै थापाले ‘तिमीहरू घर जान्छौं कि थानामा लगेर थुनिदिऊँ’ भनी उनीहरूलाई डर देखाएका थिए ।
त्यसपछि थापाले फोन गरेर प्रेमबहादुरलाई बोलाएका थिए । गाली गर्दै किशोरीको प्रेमीलाई घर पठाएका उनीहरूले किशोरीलाई पनि घर पुर्‍याइदिने भन्दै मोटरसाइकलमा चढाएर कोसी–हरैंचा ५ मा रहेको थापाको काठ मिलमा लगेका थिए । रातभर बलात्कार गरेर थापा र गुरुङले किशोरीलाई भोलिपल्ट बिहानै ४ बजे खुर्साने चोकमा ल्याएर छाडिदिएका थिए । त्यसपछि किशोरीले तत्काल फोन गरी प्रेमीलाई बोलाएकी थिइन् । उनीहरूले लगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए ।
घटनामा संलग्न रहेका थापा र गुरुङलाई फागुन २ गते छुट्टाछुट्टै स्थानबाट पक्राउ गरेको बेलबारीका प्रहरी निरीक्षक रामजी कटुवालले बताए । उनीहरूले प्रयोग गरेको को९प ८४४ र को१७प ५३१० नम्बरको मोटरसाइकलसमेत नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए । उनीहरूलाई अपहरण, शरीर बन्धक र जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको कटुवालले बताए । किशोरी धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारपछि परिवारसँग छिन् ।